Jasmine Esi ísì Mkpa mmanụ | AromaEasy N'ogbe mmanụ ndị dị mkpa
gosiri 4.86 nke 5 dabeere na 28 ahịa Fim
Jasmin mkpa mmanụ E116 buru ibu
Ahịa ego 2.89 (USD)
SKU: E116 Categories: 100% Mkpa Mkpa Mmanụ, All Products
N'ogbe Jasmin Aroma Dị Mkpa mmanụ
Nọmba CAS: 8022-96-6 ; 84776-64-7
Nọmba FEMA: 2598
EINECS Nọmba: 294-797-4
Usoro Usoro: E116
Nkọwa: Jasminum officinale dị iche. sambac Jasminum sambac (L.) Aiton
AH N AKWMKWỌ: Abalị na-achapu Jamine zuru oke, Arabian Jasmine, Sampaguita, Melati Putih, Mogra
MARA ọkwa: Middle to Base Mara
Enwere ihe ndị sitere n'okike esitere na jasmine
Ọ na - eme ka mmụọ dịkwuo elu ma na - eme ka mmadụ nwekwuo mmetụta ịhụnanya
Site na karama: ,tọ dị ụtọ, ọgaranya, ihunanya
A na-ekwenye isi ísì ọjọọ nke Jasmine nwere mmetụta nke aphrodisiac.
Jiri diffuser na-eme ka ihe jasmine na-esi ísì ụtọ n’ime ụlọ gị. Na-eme ihe ruru 1 elekere ugboro atọ kwa ụbọchị.
28 reviews maka Jasmin Mkpa mmanu E116
Samantha Schell - Nwere ike 5, 2021
Isi na-esi isi .. ma karama ahụ ezughi oke ma tinye ya ebe niile.
denise smith - Nwere ike 4, 2021
Nnukwu isi !!! Zụrụ ọtụtụ ugboro.
Sydney - Nwere ike 2, 2021
Odi ezigbo mma ma ekwere m na ọ bụ eziokwu Jasmine,.
anụ - April 30, 2021
Dị ezigbo mma ezigbo senti.
Jared - April 28, 2021
M na-enye ngwaahịa a 4 kpakpando kpakpando na-esi isi.